Tantaran'i Roanda - Wikipedia
Ny tantaran' i Roanda dia voamariky ny fisian' ny fanjakana maro madinidinika izay samy nahitana ny foko Hoto sy Totsy ary Toà, fahatongavan'ny Eorôpeana, fanjanahan-tany (ny Alemàna no voalohany, ny Belza no nanaraka), fahaleovan-tena, ny ady an-trano teo amin'ny Totsy sy ny Hoto izay niteraka ny fifandripahana, ny fifampitsabahana amin'ny raharahan' ny firenena mpifanolo-bodirindrina, ary ny fampihavanam-pirenena sy ny fizoran'i Roanda mankany amin' ny demôkrasia.
1 Talohan' ny fahaleovan-tena
2 Ny fahaleovan-tenan' i Roanda
2.1 Ny fiovam-penitra mahery vaika hoto
2.2 Ny nahazoan' i Roanda ny fahaleovan-tena
3 Ny fitondran' i Juvenal Habyarimana
3.1 Fananganana fitondrana tsy ahitana afa-tsy antoko tokana
3.2 Ny fikomiana totsy
4 Ilay famongoran-taranaka tao Roanda
4.1 Fahatanterahan' ilay famogoran-taranaka nahazo ny Totsy
4.2 Fidiran' ny FPR an-tsehatra
4.3 Fiekem-pahalemen'ny Firenena Mikambana
5 Ny fampihavanam-pirenena taorian' ny fifandringanana
5.1 Ny fametrahana ny tetezamita
5.2 Ny nanjo ireo mpitsoa-ponenana hoto
5.3 Ny fitsarana ireo mpandray anjara tamin’ ny fandringanana
6 Tohin' ny tantara tamin' i Paul Kagame
6.1 Ny fanjakazakan' ny FRP notarihin' i Paul Kagame
6.2 Lasa filoham-pirenena i Paul Kagame
6.3 Ny tafika roandey tany amin' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô
6.4 Ny fizorana mankany amin' ny demôkrasia
6.5 Fepetra noraisina hitoerana maharitra eo amin' ny fitondrana
Tany am-piandohana [hanova | hanova ny fango]
Ny mponina voalohany fantatra tao Roanda dia mety ny Pigmea izay razamben’ny Toà (Twa) ankehitriny. Nisy ny fisavana ny ambanin’ny tany izay nahitana ny vokatry ny asa vy sy zavatra vita amin’ny tanimanga (tavoara, sns) mitovitovy amin’ny an’ny kolontsana banto, izay mety namboarina tany amin’ny taonarivo voalohany taor. J.K. araka ny fanasiana daty amin’ny alalan’ny karbônina 14. Mety vahoaka avy any amin’ny lemak’i Kôngô izay tonga tao amin’ny faritr’i Roanda tamin’izany fotoana izay ihany no nanamboatra ireo zavatra ireo. Ireo mponina ireo dia mpamboly ary mety niara-nonina tamin’ny Totsy izay mpiandry andiam-biby fiompy avy any avaratra, izay mety niorim-ponenana tsikelikely teo anelanelan’ny taonjato faha-10 sy faha-15 taor. J.K.
Ireo fianakaviambe telo ireo dia nampiasa fiteny iray, dia ny kiniaroanda, ary ny fivavahana iray no niombonany tamin’ny nahatongavan’ny mpanjana-tany. Ny mwami (“mpanjaka”) dia fisehoan’i Imana (andriamanitra fara tampony) sady nanapaka ny vahoakany rehetra izay atao hoe Baniaroanda (Banyarwanda). Ny tany nanjakan’ny mwami dia nofehezina amin’ny alalan’ny lehiben-tany (amin’ny ankapobeny avy amin’ny Hoto), ny lehiben’ny toeram-piandrasam-biby (avy amin’ny Totsy) ary ny lehiben’ny tafika (izay avy amin’ny Totsy). Ny fahefana dia teo am-pelan-tanan’ny vondrona totsy ambony saranga. Ny fifanambadiana eo amin’ny fianakavian’ny mpiompy sy ny mpamboly dia fahita matetika ihany, afa-tsy ireo ao amin’ny saranga ambony mba hihazonany ny fahefana ara-pôlitika.
Ny fanjanahan-tany [hanova | hanova ny fango]
John Hanning Speke (1827-64)
Tamn’ny taona 1858 no nahitan’ny Eorôpena voalohany ny faritry ny Farihy Lehibe tamin’ny alalan’i John Hanning Speke izay tsy niditra tao amin’io faritra io. Tamin’ireo taona 1880 dia nandimby azy ny mpahita tany alemàna maromaro narakarahin’ny misiona katôlika izay nanorim-ponenana tao. Tamin’ny taona 1890 dia nampidirin’ny Alemàna ho isan’ny fananany aty Afrika Atsinanana i Roanda (izay nantsoiny hoe Ruanda) sy i Borondy (izay nantsoiny hoe Urundi tamin’izany fotoana izany) na dia teo aza ny tsy faharisihan’ny mpanjaka Musinga. Ny Belza izay nampian’ny Britanika dia nandroaka ny Alemàna ka nibodo ny faritra tamin’ny taoa 1916. Avy eo ny tanin’i Roanda-Orondy (Ruanda-Urundi) dia mapetraka ho eo ambany fifehezan’ny Fikambanan'ny Firenena (Société des Nations, SDN) ary ny fitantanana azy dia nankinina tamin’i Belzika.
Tamin’ny voalohany i Belzika dia nanapaka tamin’ny alalan’ny fahefana eo an-toerana, izany hoe ny mwami sy ny Totsy ambony saranga, nefa ny fahefan’izy ireo dia novaina sady noraiketina tamin’ny alalany fanitsiana tamin’ny taona 1926 (ny andraikitr’ireo lehibe isam-jana-paritra dia nanjary ifandovana). Ny mwami Musinga dia naongana tamin’ny taona 1931 sady nasesitany any Kôngô belza (ny Repoblika Demôkratkan’i Kôngô ankehitriny). Ny zanany lahy Mutara III Rudahigwa izay noheverina fa malemy paika kokoa, no nandimby azy. Nampihatra ny fifehezana tsy mivantana ny fitondrana tera-tany ka nampisahanin’ny mpanjanaka ny fanatanterahana ny asa fanajariana ny tany. Nisy noho izany ny fanisana ny lehilahy baniaroanda ampy taona sy afaka miasa tamin’ny taona 1934 hatramin’ny taona 1935, ka izay voaisa dia nomena bokikely mirakitra ny mombamomba ny tena izay ahitana ny vondrona misy ny tena izay nantsoina hoe “foko”: Totsy na Hoto na Toà. Ny misiona kristiana, izay prôtestanta tamin’ny faran’ny vanimpotoana alemàna, fa lasa katôlika kosa tamin’ny vanimpotoana belza, dia nihamaro sady nisahana ny fanabeazana ny vahoaka manontolo. I Mutara, izay mwami mbola tanora (20 taona izay raha nandray ny fahefany), dia natao batemy (batisa) tamin’ny taona 1943. Niharatsy anefa ny fifadraisan’ny Fiangonana sy ny fahefana mpiahy fotoana fohy taorian’izany, noho ny famindrana nihanitombo hatrany ny fahefan’ny tompon-tany any amin’ny mpanjana-tany. Notakian’ny tompon-tany ny fanafoanana ny asa fanompoana, notakiany koa ny famerenana indray ny fifidianana ny lehibe isan-jana-paritra, ny Hoto izay maro an’isa kosa, izay nosahanin’olona tsy niofana afa-tsy tao amin’ny sekolin’ny misiona, dia nitaky ny hiray amin’ny fahehana pôlitika. Nanomboka tamin’ny taona 1956, nelanelanin’ny Filankevitra ambony izay notarihiny, sy noho ny faneren’ireo mpanolo-tsaina, dia nitaky tetiandro mazava momba ny hahazoan’ny firenena ny fahaleovan-tenany izy, fa ny maro an’isa hoto kosa dia nisafidy ny fanavaozana ara-piarahamonina sy ara-pôlitika alohan’ny fahaleovan-tena izay hanome ny Totsy ilay fahefana tsy refesi-mandidy notanany talohan’ny fanjanahan-tany. Niomana haneho izany fitakiana izany teo amin’ny Firenena Mikambana izy tamin’ny taona 1959 raha nantsoina tampoka tany Bujumbura izay renivohitr'i Roanda-Orondy (Ruanda-Urundi) tamin’izany fotoana izany. Nambara tamin’ny takarivan’ny 25 Jolay 1959 ny fahafatesany izay tsy fantatra antony. Nipoaka tamin’izay ny ady an-trano.
Taorian’ny fahafatesan’ny mpanjaka Mutara izay maty tsy nisy mpandova, i Kigeli V mpandimby azy, izay tsy tian’ny Hoto nefa napetraky ny mpanolo-tsain’ilay mpanjaka maty, dia nampihatra pôlitika hentitra tamin’ny fiarovana ny tombontsoan’ny saranga ambony totsy.
Lasa nanana endrika ara-pôlitika ireo fitakiana ara-piarahamonina sy ara-toekarena hatramin’ny namoahana ilay atao hoe Manifeste des Bahutu tamin’ny taona 1957, izay namporisihin’ny Parti du Mouvement de l’Emancipation Hutu (Parmehutu), ka nivadika ho fifanandrinan’ny samy ao amin’ny fianakaviam-ben’ny tera-tany. Nanohana ny maro an’isa hoto ny Fiangonana fa ny mpanjana-tany kosa namela ny fikomiana handroso ka nipoaka izany tamin’ny volana Novambra 1959 izay nampisy ra mandriaka teo amin’ny firenena taorian’ny famonoan’ny sasany ny tompon’anandraikitra ara-pôlitika hoto. Ny Totsy, izay vitsy anisa, dia naringana sy nenjehin'ny Hoto ombieniombieny. Tamin’ny taona manaraka dia voatery nandao ny firenena ny mwami ary nanao toraka izany koa ny Totsy miisa mihoatra ny 200 000.
Tamin’ny volana Janoary 1961 dia nambara ny fitsanganan’ny Repoblika ary nisy fitsapan-kevi-bahoaka volana vitsy taorian’izany, izay nandavana ny hiverenan’ny fanjakà-mpanjaka tamin’ny taha 80%n’ny isam-bato. Nahazo fadresena ny Parmehutu tamin’ireo fifidianana natao tamin’ny volana Septambra 1961 tamin’ny nahazoany ny 78 %n’ny vato. Tamin’ny 26 Ôktôbra 1961 dia voafidy ho filohan’ny Repoblika roandey i Grégoire Kayibanda, mpitan-tsoratry ny arsevekan’i Roanda sady mpitarika ny antolo Permuhutu.
I Gaspard Cyimana, i Gregoire Kayibanda, i Soapy Williams, ary John Kennedy
Noho ny fihizingizinan’ny Conseil de tutelle (“Filan-kevitry ny fiahiana”) ao amin’ny Firenena Mikambana dia nanambara ny fahaleovan-tenan’i Roanda tamin’ny 01 Jolay 1962 i Belzika. Ny Permuhutu, izay niova anarana ho Mouvement Démocratique Républicain (MDR), dia nanjaka teo amin’n y fiainana ara-pôlitikan’i Roanda nandritra ny folo taona manaraka. Lany indroa ho filoham-pirenena i Grégoire Kayibanda, tamin’ny taona 1965 sy 1969. Tamin’ny taona 1963 dia nisy ny fanonganam-panjakana tsy nahomby nataon’ireo mpitsoa-ponenana totsy izay niteraka fandripahana mifanesy ny Totsy. Niverina indray ny herisetra tamin’ny taona 1966 tao amin’ny sekoly sy ny oniversite, noho ny fidirana an-keriny nataon’ny Totsy vitsivitsy nitondra fitaovam-piadiana tao amin’ny sisin-tany ao atsimo. Farany, rehefa nipoaka koa ny tsy filaminana tao Borondy, izay nanjakan’ny miaramila totsy, sady nisy koa Hoto izay nitady fialokalofana tany Roanda, dia nisy indray ny herisetra nifanesy nozakain’ny Totsy. Nisy fisaraham-bazana anefa teo amin’ny Hoto any avaratra (izay niharan’ny herisetran’ny Totsy vao tsy ela akory) sy ny Hoto ao afovoany sy ao atsimo.
Ny fitondran' i Juvenal Habyarimana[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny volana Jolay 1973 dia naongan’ny jeneraly Juvénal Habyarimana, minisitry ny Fiarovana avy amin’ny Hoto any avaratra, tsy nisy ra mandriaka, ny filoham-pirenena Kayibanda. Naato amin’ny asany ny Antenimiera sy ny antoko MDR tamin’ny fanambaràna nataony. Nanohitra ny pôlitikam-panavakavahana ara-poko sy ara-paritra nahazatra ny filoha teo aloha ity filoham-panjakana vaovao ity. Izany pôlitika izany anefa dia nampiasainy indray ho amin’ny tombontsoany taty aoriana tamin’ny famaritana ny fitsinjaran-toerana isam-paritra tao amin’ny sekoly sy ny asam-panjakana. Noho izany dia tsy nisy Totsy tamin’ireo ben’ny tanàna (bourgmestres) miisa 143 manerana an’i Roanda, tsy nisy Totsy koa teo amin’ny fitarihana ny prefektiora.
Tamin’ny taona 1975 dia nanorina ny antoko pôlitikany ny filoham-pirenena Habyarimana, dia ny Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND) ka nisy ny fandaniana lalàmpanorenana vaovao tamin’ny taona 1978 izay nanamafisana ny tsy fanekena afa-tsy antoko tokana. Taorian’ny tsy fahombiazan’ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 1980 dia mbola lany indray tsy nisy mpanohitra izy tamin’ny taona 1983 sy 1988.
Tamin’ny taona 1990 dia nandefa tafika tany Roanda i Belzika sy i Frantsa ary firenena maro avy ao Afrika Afovoany mba hanoherana ny fanonganam-panjakana avy ao Oganda izay nokononkononin’ireo Totsy mpitsoa-ponenana. Nivondrona tao amin’ny Front Patriotique Rwandais (FPR) izy ireo izay notohanan’ny Hoto mpandanjalanja nanohitra ny fitondrana sady monina ao Roanda. Noteren’ny mpanohitra sy fianakaviambe iraisam-pirenena ny firosoana ho amin’ny demôkrasia, izay nanenika an’i Afrika, ny filoha Habyarimana ka nanaiky ny hametraka lalàmpanorenana vaovao tamin’ny taona 1991 izay niteraka ny famelana ny fisian’ny antoko pôlitika maro. Nosoloana Assemblée nationale de transition ("Antenimieram-pirenena tetezamita") ny Conseil national de développement ("Filan-kevi-pirenena momba ny fampandrosoana"). Nisy amin’izay ny fanendrena piraiminisitra.
Nisy ny fifanarahana momba ny fizarana ny fahefana ara-pôlitika teo amin’ny MRND sy ny FPR ary ireo antoko pôlitika mpanohitra izay nosoniavina tao Arusha any Tanzania tamin’ny volana Aogositra 1993. Tsy nahavita nanangana governemanta iraisana anefa ny piraiminisitra Faustin Twagiramungu (izay Hoto mpandanjalanja sady filohan’ny MDR), tamin’izany koa dia nanafika ny tapany avaratr’i Roanda ny FPR ka nahafaty Hoto ana hetsiny maro.
Tamin’ny 6 Avrily 1994 dia nisy nitifitra ny fiaramanidina nitondra ny filohan’i Roanda sy ny an’i Borondy, izay samy Hoto, tamin’ny fotoana niomanan’io fiaramanidina io hipetraka eo amin’ny seranam-piaramanidina tao Kigali. Izany fahafatesan’ny filoha Habyarimana izany dia niteraka herisetra mahery vaika: ireo milisy hoto ao amin’ny Interahamwe, izay noforonin’ny fitondrana, sy ny ampahany amin’ny andian-tafi-panjakana ara-dalàna atao hoe FAR (Forces armées rwandaises) dia nampihorohoro sy namono olona manerana an’i Roanda. Nahafaty olona teo anelanelan’ny 500 000 sy 1 000 000 eo ny fandringanana ka isan’izany koa ny Hoto mpandanjalanja. Izany fandripahana izany dia nitranga malalaka tsy nisy fandraisana andraikitry ny Firenena Mikambana na ny firenena tandrefana (izay nanana solon-tena tao Roanda) tamin’ny fanelanelanana. Tao tokoa mantsy ny Mission des Nations unies d’assistance au Rwanda (Minuar) ("Iraky ny Firenena Mikambana amin’ny fanampiana an’i Roanda") sy ny solontenan’i Frantsa ary ny an’i Belzika.
Tamin’ny 23 Jona 1994 dia nandefa ny Opération Turquoise i Frantsa, izay fidirana an-tsehatra ara-tafika sy ara-piahiana ny maha olona nahazo alalana tamin’ny Firenena Mikambana. Napetraka ny faritra azo antoka lavitry ny ady tao amin’ny faritra atsimo-andrefan’i Roanda. Nisy ihany ny ezaka fanelanelanana hampitsaharana ny ady nefa tsy nahomby izany ka lasa ny FRP, izay notohanan’i Oganda, no nandresy tamin’ny ady. Taorian’ny fahazoan’ny FPR an’i Kigali tamin’ny 14 Jolay 1994 dia nisitaka tao amin’ilay faritra narovana tsy misy ady ny tafika roandey. Noho ny fatahoarana ny valy faty dia Hoto miisa 2 000 000 any ho any no nandositra an’i Roanda ka nila fialofana tany Tanzania sy tany Zaira izay nanorenana tobim-pialokalofana maro teo amoron’ny tanàna Goma. Nisy koa ny valan’aretina kôlerà izay nahafaty olona hatramin’ny 1 200 any ho any isan’andro tamin’ireo herinandro voalohany.
Fiekem-pahalemen'ny Firenena Mikambana[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny taona 1999 dia niaiky ny maha tompon’andraikitra azy tamin’ny fipoahan’ilay famongoran-taranaka ny Firenena Mikambana, satria nijery fotsiny vokatry ny "fitandremana tsy azom-piheverana" noho ny tsy fisian’ny ho enti-manana teo am-pelan-tanany, indrindra ny avy amin’i Etazonia, sy noho ny "safidy ara-pôlitika".
Ny fametrahana ny tetezamita[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny 19 Jolay 1990 tao Kigali, ny FRP dia nanangana governemanta izay nampanarahina ny toromariky ny fifanarahana nosoniavina tao Arusha. Noho ny maha tompon’andraikitra ny MRND tamin’ny fandripahana dia tsy nampandraisina anjara tamin’izany governemanta izany. Ilay fitondrana ananan’ny filoham-pirenena fahefana lehibe notarihin’i Pasteur Bizimungu (izay Hoto niaraka tamin’ny FRP tamin’ny taona 1990) dia niavaka noho ny miaramila totsy maro an’isa ao anatiny. Nitsikera ny fibiriokan’ny fitondrana i Seth Sendashonga, minisitry ny Atitany, ka nesorina tamin’ny toerany sady nisy namono tao Nairobi (any Kenia) tamin’ny taona 1998. Nametra-pialana i Faustin Twagiramungu, piraiminisitra hoto avy ao amin’ny antoko MDR, satria tsy azoazony ny hizaràn’ny FPR ny fahefana ara-pôlitika amin’ny antoko hafa. I Pierre-Célestin Rwigyema no notendrena ho piraiminisitra nandimby azy. Ny Ligue rwandaise des droits de l’homme ("Fivondronana roandey momba ny zon’olombelona") sy ny fikambanana iraisam-pirenena maro dia nanameloka ny fanagadrana tsy amin’antony mazava sy ny tsy fisian’ny fifampitokisana izay nanjaka tao Roanda.
Tobin'ny mpitsoa-ponenana tany Zaira
Tsy ela ireo manam-pahefana ao Kigali dia niharan’ny fanerena mafy avy amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena mba hanamora ny fodian’ireo mpitsoa-ponenana. Nanohitra izany ny fitondrana ka nanamafy fo sy nanapa-kevitra tampoka tamin’ny faran’ny volana Avrily 1995 ny amin’ny tokony hanesorana ireo olona ao amin’ny toby natokana ho an’ny nifindra toerana tao amin’ny faritra narovana amin’ny ady. Anjatony maro ny olona novonoin’ny tafika totsy tao amin’ny tobin’i Kibeho. Tamin’ny 9 Jona 1995 dia nanery ny Conseil de sécurité ("Filan-kevi-pilaminana") ao amin’ny Firenena Mikambana ny fitondran’i Kigali mba hampihena ny fe-potoam-piasan’ny miaramila ao amin’ny Minuar sy hanakely ny isan’izy ireo. Tamin’ny volana Desambra 1995 dia nandroaka ireo fikambanana tsy miankina amim-pitondram-panjakana miisa 43, izay nanameloka ny fandringanana tao Kibeho, ny fitondram-panjakana.
Teo an-danin’izany, tao amin’ny tobin’ny mpitsoa-ponenana tao amin’ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô (Zaira taloha), niomana hanao valifaty ny tompon’andraikitry ny fandripahana nialokaloka tany. Tamin’ny taona 1997, ny fanampiana nomen’i Oganda sy i Roanda ho an’ny andian-tafik’i Laurent-Désiré Kabila dia nahatonga ny mpitsoa-ponenana hoto roandey miisa manodidina ny 400 000 handositra any anaty alan’ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô. Nisy andia-mpitsoa-ponenana vitsivitsy izay afaka nody any Roanda nefa niharan’ny fandripahana nataon’ny Totsy ny ankamaroan’izy ireo. Tamin’ny volana Jona 1998 dia niampanga ny tafika roandey sy ny andia-miaramila notarihin’i Laurent-Désiré Kabila ho nanao fandringanana tamin’ny taona 1997 sy 1998, izay sokajina ho asa famongoran-taranaka, ny Firenena Mikambana.
Tamin’ny Novambra 1994, ny Conseil de sécurité ("Filan-kevi-pilaminana") ao amin’ny Firenena Mikambana dia nanangana ny Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ("Fitsarana heloka bevava iraisam-pirenena ho an’i Roanda") tao Arusha any Tanzania mba hahafahana mitsara ireo tompon’antoka tamin’ny fandringanana (indrindra ireo mpikarakara sy mpandrindra izany fandringanana izany). Nanano sarotra ny fanombohana ny fitsarana, nefa taty aoriana dia nisy olona iray sahy nijoro ho vavolombelona voalohany tamin’ny 10 Janoary 1997. Tamin’ny volana Aogositra 1998 dia namoaka ny didim-pitsarana manameloka ny piraiminisitra Jean Kambanda ny TPIR. Ela fiasa sy tsy ampy ho enti-manana ny TPIR, nefa mbola nizaka ny tsy fisian’ny fiaraha-miasa teo amin’ny fitondram-panjakana tao Roanda izay nanohitra ny fanenjehana ireo mpikambana ao amin’ny fitondram-panjakana vaovao izay nanao fahadisoana taorian’ny fakan’ny FPR ny fahefana.
Nisahana io raharaha io ihany koa ny fitsarana roandey afaka mitsara ireo vorohirohy tamin’ny fandripahana izay miisa 100 000 any ho any. Mba hanafainganana ny fitsarana dia nampiana ny fitsarana tsotra, nanomboka tamin’ny taona 2002, tamin’ny alalan’ny fitsarana sahanin’ny fokonolona (atao hoe gacaca). Araka ny tarehimarika nomen’ny Cour suprême rwandaise ("Fitsarana tampony rioandey") mantsy dia didim-pitsarana miisa 5 000 ihany no navoaka teo anelamenan’ny taona 1994 sy 2002, ka ny 660 dia fanamelohana ho faty ary ny 1785 fanamelohana higadra mandra-pahafaty. Izany fitsarana ara-pomban-drazana izany, izay mifototra amin’ny fieken-keloka ampahibemaso mba hahafahana mahazo fampihenan-tsazy, dia nanamora ny fampihavanam-pirenena.
Nihabetsaka hatrany ny fanoherana ny fitondrana noho ny fiezahany hanatanteraka ny fampihavanam-pirenena sy ny fizarana ara-demôkrasia ny fahefana ara-pôlitika. Noho izany dia ny ampahany amin’ireo Hoto mpandanjalanja, izay nampiasainy ho antoka tamin’ny fakana ny fahefana tamin’ny taona 1994, no novelezin’ny fitondrana. Nametra-pialana ireo izay nitazona andraikitra tao amin’ny fitondrana ary nisy namono antsokosoko ny sasany. Tamin’ny volana Jona 1999 dia nanapa-kevitra ny hanalava ny fotoan’ny tetezamita ny fitondram-panjakana mba hahafahana manomana lalàmpanorenana hasolo ilay lalàna fototra novolavolaina tamin’ny taona 1994.
Tamin’ny volana Marsa 2000 dia nametra-pialana ny filoham-pirenena Pasteur Bizimungu. Nanomezany tsiny ireo Totsy tao amin’ny fitondrana, indrindra ireo nialokaloka tany Oganda, ny fanadihadiana izay nikendrena ireo tompon’andraikitra hoto teo amin’ny fitondrana hametra-pialana.
Tamin’ny volana Avrily 2000 dia notendrena handimby an’i Pasteur Bizimungu (izay nogadraina tamin’ny Avrily 2002 noho ny fiampangana azy ho nanohintohina ny fiarovana ny fanjakana) i Paul Kagame, izay filoha lefitra sady minisitry ny Fiarovana. Ny fotoana nanaovana izany fanendrena izany dia nifanandrify tamin’ny nanambaràna ampahibemaso ny tatitry ny mpanadihady tao amin’ny TPIR, izay nilaza ny maha voasaringotra ny jeneraly Paul Kagame tamin’ny fampidarabohana ilay fiaramanidina nitondra ireo filoham-pirenena roa (roandey sy ogandey) tamin’ny volana Avrily 1994 sady miampanga azy ho nampihetsika ny fandripahana.
Tamin’ny taona 1998 dia nandefa andian-tafika tany amin’ny faritra atsinanan’ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô (Zaira taloha) i Roanda mba "hitandroana ny filaminana" izay korontanin’ireo Hoto henjam-pihetsika mialokaloka any. Etsy an-daniny dia tao koa i Oganda sy i Borondy izay nanohana ny fikomiana nataon’ny Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD/Goma) nanoherany ny fitondran’ny filoham-pirenena Laurent-Désiré Kabila. Na dia izany aza dia naneho ny tsy fitoviany hevitra tamin’i Roanda (izay mpihavana aminy) i Oganda fotoana fohy taorian’izany ary nisy ny fifanandrinana nandatsahan-dra nifanaovan’ny tafika namita iraka nalefan’ireo firenena roa ireo tao Kisangani, ka niteraka disadisa teo amin’ny sisin-tany iraisany teo anelanelan’ny taona 1999 sy 2000 izany. Nifampiraharaha mivantana tamin’i Kabila filoham-pirenena kôngôley ny mpitondrana tao Oganda hisitahan’ny tafika ogandey. I Borondy ary indrindra i Roanda no firenena sisa nizaka ny tsy fankasitrahan’ny olona ny fibodoana an’io faritra io.
Maty i Laurent-Désiré Kabila tamin’ny taona 2000 ka nandimby azy ny zanany Joseph Kabila. Lany ho filoham-pirenen’i Etazonia i Georges Bush (filoha teo anelanelan’ny taona 1989 sy 1993) izay nitsikera kokoa ny fitondrana tao Roanda raha mitaha amin’i Bill Clinton (filoha teo anelanelan’ny taona 1993 sy 2001). Izany rehetra izany dia nampivoatra ny toe-draharaha tao amin’io faritra io. Rehefa vita sonia ny fifanarahana momba ny fandriam-pahalemana teo amin’i Roanda sy i Oganda tamin’ny taona 2001 dia nanao sonia fifanarahana tamin’i Repoblika Demôkratikan'i Kôngô i Roanda tamin’ny volana Jolay 2002 ka ny tafika kôngôley dia hanangonana sy hanaisotra ny fitaovam-piadiana teo am-pelan-tanan’ny milisy henjam-pihetsika hoto, fa i Roanda kosa hanao izay hampodiany ny tafika nalefany. Tamin’ny volana Ôktôbra 2002 dia nanambara i Roanda fa efa nampody ny andian-tafiny manontolo.
Maro ireo mpanohitra ny fitodrana sy ny mpanara-maso izay nilaza fa mibirioka mankany amin’ny fitondrana jadona i Paul Kagame na dia nitarika an’i Roanda nankany amin’ny fanaovana fifidianana demôkratika aza izy. Taorian’ny nandaniana amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka ny lalàmpanorenana vaovao tamin’ny taona 2003 dia nisy ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny 25 Aogositra 2003 izay nahalany an’i Paul Kagame tamin’ny 95 %n’ny vato manan-kery. I Faustin Twagiramungu, ao amin’ny antoko mpanohitra, piraiminisitra teo aloha avy amin’ireo Hoto pandanjalanja, dia nampangaina ho mpampisara-bazana ara-poko nandritra ny fampielezan-kevitra, ka fiampangana nisy fiantraikany goavana tamin’ny fitiavan’ny olona azy izany.
Tamin’ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin’ny volana Ôktôbra 2003 dia nisy ny fifarimbonan’ny antoko maro tao amin’ny FPR notarihin’i Paul Kagame izay nahita fahombiazana ka nahazo ny 73,78 %n’ny vato. Nandritra izany fifidianana izany dia nosakanana tsy hilatsaka na nesorina avy hatrany ireo antoko lehibe mpanohitra na mpilatsaka hofidina mpanohitra. Nisy antoko pôlitika roa izay nahazo mihoatra ny 5 % ka afaka nahazo toerana tao amin’ny Antenimiera, tsy iza izany fa ny Parti social-démocrate (PSD) izay nahazo 12,31 % sy ny Parti libéral (PL) izay nahazo 10,56 %.
Nanaraka izany fifidianana izany ny mpanara-maso iraisam-pirenena ka nihevitra fa dingana mankany amin’ny fampanjakana ny demôkrasia ao Roanda izany. Araka ny iraka fanaraha-maso nampanaovin’ny Vondrona Eorôpeana dia nahitana tsy fanarahan-dalàna sy hosoka ihany izany fifidianana izany, toy ny fisakantsakanana ny mpanohitra, ny fampitahorana, ny fanagadrana, sns. Tamin’ny taona 2010 dia lany ho filoham-pirenena indray i Paul Kagame.
Fepetra noraisina hitoerana maharitra eo amin' ny fitondrana[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny volana Ôktôbra 2015 dia nampanaovin’i Paul Kagame latsabato ny Antenimieram-pirenena momba ny fanitsiana ny lalàmpanorenana, ary roa volana taty aoriana dia lany tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka ilay lalampanorenana. Izany fanitsiana izany dia nahafahany misahana ny maha filoham-pirenena mihoatra ny indroa. Lany indray tokoa izy tamin’ny taona 2017.
Mandroso ny toekaren’i Roanda tamin’ny fitondran’i Paul Kagame nefa takalon’izany ny famerana ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety sy ny famoretana mahazo ny mpanohitra. Maro amin’ny mpanohitra mantsy ny nanjavona tsy hita popoka sy ny nisy namono (toa an’i Patrick Karegeya sy i Jean-Léonard Rugambage), ary ny nisy nikasa honamono (toa an’i Faustin Kayumba Nyamwasa).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantaran%27i_Roanda&oldid=998365"
Voaova farany tamin'ny 2 Novambra 2020 amin'ny 18:24 ity pejy ity.